Crowdsource ny fanadiovana data B2B | Martech Zone
Crowdsource ny fanadiovana data B2B
Alarobia, Aprily 6, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Tamin'ny herinandro lasa aho dia nifanakalo hevitra tsara tamin'ireo olona tao NetProspex, Rindrambaiko ho toy ny fitaovan'ny serivisy ahafahanao manatsara sy manamarina ny orinasanao amin'ny firaketana ny fifandraisana amin'ny orinasa. Manankarena tokoa ity rafitra ity, efa manangona data amin'ny fifandraisana B21B voamarina maherin'ny 2 tapitrisa.
Indraindray mora ny manangona anarana, adiresy mailaka na ampahany hafa amin'ny mombamomba ny antoko. Na izany aza, ny olona mamindra asa isaky ny taona vitsivitsy eo ho eo, noho izany ny database B2B dia matetika no mijanona. Ny firaketana an-tsoratra ny rakitsoratra maty dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fanaterana ny mailakao ary hanakana anao mihitsy aza. Fanampin'izany, tsy manampy ny ekipan'ny varotrao izany raha miditra miaraka amina angon-drakitra ampahany ny fitarihanao.
NetProspex dia mitambatra tsy tapaka miaraka amin'ny CRM ary manolotra tsy ho ela API ka ny rafitra ivelany dia afaka manadio sy manatsara ny angon-drakitra automatique fotsiny. Ho fanentanana fanampiny, rehefa mampakatra rakitra vaovao ao amin'ny NetProspex ianao, dia omena trosa… satria lasa anisan'ny vahoaka manamarina ny angona ianao! Izany no fomba mahaliana ho an'ny orinasa vaovao manintona mba hiditra amin'ny serivisy sy hitazona ny vidiny ho an'ireo mpanjifa ireo!
Ity misy fomba fiasan'ny Netprospex:
Ireo mpampiasa dia manampy fifandraisana amin'ny tahiry NetProspex ho takalon'ny fifandraisana vaovao. Sehatra haitao arahin'antoka no ampiasaina mba hahazoana antoka fa voamarina ny angon-drakitra marobe ary hitazona ny kalitaon'ny tahiry rehefa mandeha ny fotoana.
Ny fitaovana fikarohana ao amin'ny Internet an'ny NetProspex dia manome fahitana bebe kokoa ho an'ny mpihaino kendrena marina, ary ahafahan'ny mpampiasa misaraka ny vinavinany amin'ny alàlan'ny fitsinjaram-pahefana ao anatin'izany ny asan'ny asa, ny indostria, ny haben'ny orinasa, ny toerana misy azy, ny orinasa manokana, ny anarana, ny fametrahana teknolojia ary maro hafa.
Ny firaketana farany dia omena ny mombamomba ny fifandraisana, ny mombamomba ny mombamomba ny fiaraha-monina ary ny daty sy isa izay maneho ny marina sy ny fotoana nanamarinana ny firaketana.
Ny rafitra dia mora vidy (miaraka amin'ny antoka ara-kalitao) manomboka amin'ny $ 0.75 isaky ny firaketana. Mihena be ny vidiny raha mividy crédit fampidinana mialoha ianao… hatrany amin'ny 18 cents isaky ny firaketana ho rakitra 1 tapitrisa. Ho an'izay nividy serivisy fanadiovana angon-drakitra taloha… vidiny lafo ity. Aza adino fa mahazo trosa amin'ny fampakaranao koa ianao!
Azonao atao koa ny mampiasa ny NetProspex's fahaiza-mikaroka:
Ho anao izay mieritreritra fa mety ho somary ratsy ny rafitra toa izao: Rehefa atakalo amin'ny NetProspex ny rakitra dia ampandrenesina ilay fifandraisana ary omena fotoana ahafahana misafidy ary esorina amin'ny tahiry NetProspex ny mombamomba azy ireo.Eny dia somary miakatra avy amin'ny rafitra hafa manangona sy mivarotra ny angon-drakitrao tsy misy fiheverana! Ho fanampin'izany, ny NetProspex dia mitaky ny mpanjifany hanaraka ny CAN-SPAM alohan'ny hampiasana ny rakitra ho an'ny mailaka.
Inona no tsy mety amin'ny Foursquare?
6 Okt 2011 amin'ny 2:35 PM
Ka Doug, dokam-barotra ve ity? Satria ianao dia nitanisa lainga miharihary tato amin'ity lahatsoratra ity izay toa tsy inona intsony fa ny fametrahana doka be voninahitra. Ilay ampahany amin'ny fanamarinana ny maha-ara-dalàna ny mailaka… eny, tsy marina izany, satria ny adiresy mailaka dia ao amin'ny lisitr'izy ireo. Raha misy miantso ahy ka miteny hoe: “Ie, mampaninona anao ve raha amidinay amina olon-kafa ny adiresy mailakao?” Hevero izay valiny?
Ny adiresy mailaka dia nipetraka tao amin'ity tahiry ity ary nandalo afobe aho nanandrana nanala azy. Tiako ny hevitra kely nataonao momba ny politika "opt out" izay hiantsoan'ireto olona malala-tanana ireto ary hanontany an'i "Andriamatoa. ry mpanjifa, nividy ny adiresy mailaka taminao tamin'ny mpivarotra ambongadiny sasany izahay izay nanapa-kevitra fa tsy faly fotsiny izy amin'ny tombony amin'ny varotrao, ka dia namidiny ianao, ka mampaninona anao raha amidinay amin'ny olon-kafa ny mombamomba anao? ”Satria azoko antoka fa olona 21 tapitrisa no hanaiky hotorahan'ny olon-tsy fantatra. Toa hafahafa ihany, sa tsy izany? Mahafaly ny mahafantatra fa ny sasany amin'ny mpanjifany dia vao mainka nihombo tamin'ny NetProspex, noho izany dia manantena aho fa hamoy ny orinasa sasany noho ny olako.
Ity ny tsipika farany Doug; AZA MIASA MIASA amin'ny olon-kafa miaraka amin'ny dokambarotra hividianana banga tampoka. Tsy mandefa mailaka amin'ny olon-tsy fantatra akory ianao mba hividianana banga mifandraika amin'izany. Paikady tsy nahomby izay tsy nanao afa-tsy ny nahatonga anao hiditra anaty lisitra mainty ho an'ny mpizara ary nahatonga ny taham-pisokafanao sy ny tsindry anao hianjera toy ny vatolampy ohabolana. Ireo mpanjifa izay azonao antoka amin'ny alàlan'ny mailaka spam, antso ary fax dia ny anarana ambany indrindra raha ny amin'ny tombom-barotra. Raha ny hamitaka olona no tanjonao dia kitiho mafy sy haingana izy ireo ary avy eo manjavona amin'ny alina, dia ity angamba no programa ho anao! Raha toa ny tanjonao hampiorina ny tsy fivadihan'ny mpanjifa sy hampiorina ny fahatokisan-tena, ity programa ity dia ho lasa fantsika ao anaty vatanao. Ny mpanjifa tsy mivadika (manan-tsaina) dia tsy mividy amin'ny spam.
10 Okt 2011 amin'ny 4:20 PM
Moa ve ianao sa tsy nilaza hoe: "Rehefa atakalo amin'ny NetProspex ny rakitsoratra iray, dia ampandrenesina ilay fifandraisana ary omena fotoana hisafidy izy ireo, ary esorina amin'ny database NetProspex ny mombamomba azy.
Tsy azoko antoka izao izay heverinao ho lainga, fa rehefa milaza zavatra tsy marina ianao dia very hevitra aho hoe ahoana no mety hahatonga izany ho marina lavitra. Tsy nifandray tamiko mihitsy ny NetProspex mba “hangataka alalana amiko.”
Mikasika ny fampiasana mailaka tompon'andraikitra, avelao aho hilaza aminao zavatra iray na roa momba ny andraikitra. Ny fiheverana fa misy olona tsy mitandrina amin'ny adiresy mailaka dia “tsy tompon'andraikitra.” Raha mieritreritra vetivety ianao fa ny olona iray izay miharihary fa mahalala ny lalàna momba ny spam sy ny teknikan'ny spam dia tsy mitandrina amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka… “tsy tompon'andraikitra izany.” Tapitra ny andraikitro rehefa mampiasa fikambanana adiresy mailaka ahazoana tombony ireo fikambanana ratsy fanahy rehefa nilaza izy ireo fa tsy hanao izany. Tapitra ny andraikitro rehefa mandoa bilaogera ny orinasa hanoratra lahatsoratra mahafinaritra momba ny serivisin'izy ireo hahafahan'izy ireo milaza fa “tsy mitovy” izy ireo. Fa azoko antoka fa tsy nandoa vola ianao tamin'ny hevitrao, satria fantatsika rehetra fa tia mandany ny volany manokana ny mpitoraka bilaogy mankany amin'ny orinasa tsy miankina mba hahafahan'izy ireo manoratra tsikera mamirapiratra momba ny vokatr'izy ireo. Raha ny marina, famintinana fohy ny lahatsoratrao amin'ity tranokala ity fotsiny dia mampiseho fa toa manangona entana maro amin'ny orinasa ianao amin'ny alàlan'ny “lahatsoratra”. Toa tsy azontsika itokisana na iza na iza amin'izao fotoana izao, eny fa na dia ny hevi-diso farany an'ny hevitra malalaka aza.
10 Okt 2011 amin'ny 5:25 PM
Andao atomboka amin'ny fiantsoana anarana mitohy. Ny lainga dia "fanambarana diso natao fanahy iniana hamitahana". Manome bilaogy fampahalalana maimaimpoana ho an'ireo liana aho hanome vaovao sy vaovao momba ny vokatra izay hanampy ny ezaky ny varotra orinasa. Ahoana no valisoa ny asako raha mandainga fotsiny aho? Firy ny mpamaky azoko? Fa maninona no hataoko tandindomin-doza toy izany ny lazako sy ny orinasako?
Azafady mba vakio ny politika Netprospex:
"Ireo mpampiasa dia mety misafidy ny hiala amin'ny fahazoana fifandraisana mailaka avy amin'ny NetProspex ary torolàlana mazava momba ny opt-out dia tafiditra ao anaty hafatra mailaka na miantso anay fotsiny amin'ny 1-888-826-4877."
Niantso azy ireo ve ianao?
Ny lahatsoratry ny bilaogiko dia nitatitra ny fizotrany marina nitantara tamiko tamiko tamin'ny fihetsik'izy ireo. Raha sosotra ianao amin'ny orinasa “ratsy toetra” nizara ny mailaka nataonao na nampiasanao diso azy dia ento miaraka amin'izy ireo! Tena tiako ianao! Raha nanao izay nolazainao izy ireo dia tsy ekeko na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Raha heverinao fa nanitsakitsaka ny fe-potoam-piasan'izy ireo izy ireo dia tano izy ireo. Raha nandika ny fitsipiky ny SPAM izy ireo dia tatero. Tsy afaka manampy anao aho. Tsy miasa ho azy ireo aho. Tsy nasiako adiresy mailaka tamin'izy ireo. Tsy nandefa mailaka taminao aho.
Raha mino ianao fa mandika ny lalàna mifehy ny FCC ary mahazo karama amin'ny lahatsoratra aho fa tsy manambara izany dia mandehana mitory ahy! Azoko antoka fa milamina ny bokiko. Manana mpihaino mahafinaritra mankasitraka ny asako aho ary manohy manao tsara ny bilaogy. Tsy mila ny fanohananao aho. Ento any an-toeran-kafa ny trolling mampalahelo anao.
14 Okt 2011 amin'ny 1:43 PM
"Rehefa atakalo amin'ny NetProspex ny rakitsoratra iray, dia ampandrenesina ilay fifandraisana ary omena fotoana azo isafidianana izy ireo, ary esory ny mombamomba azy ireo ao amin'ny angona NetProspex."
Manohy misoroka an'io ianao ary tiako ny manontany anao indray mandeha, ho an'ny rakitsoratra, tsy izany ve sa tsia ny politikan'izy ireo? Efa nanandrana nanamarina an'io ve ianao sa mandray ny teny nomeny fotsiny? Araka ny nolazaiko teo aloha, ny bilaoginao dia mamaky toy ny doka, ary rehefa mandefa sary tsy marina momba ny orinasa iray ianao, miaraka amin'ireo politika izay azo antoka fa tsy arahana, avela hanontany tena aho hoe maninona ianao no hanao tatitra momba ny zavatra iray nefa tsy manamarina ireo fanambarana ireo raha ny marina? Toy ny hoe nifampitafatafa taminà olona ahiahiana namono olona izy ary nanontany azy raha nanao izany heloka izany izy, avy eo nitatitra ny valinteniny ho fikarohana zava-misy. Farafaharatsiny farafaharatsiny dia meloka amin'ny asa fanaovan-gazety mahamenatra ianao. Antsoinao ity trolling ity; Antsoiko fa diso izany fanitsiana izany (ary tsara fanahy aho eto).
Ary raha troll aho, dia mandika ny lalàna voalohany ianao. Aza omena sakafo ny troll.